Halabuurka dab dhaliyaha naaftada
Dab-dhaliyeyaasha naaftada waxay inta badan ka kooban yihiin laba qaybood: engine iyo beddelka engine Diesel waa mishiinka guba saliidda naaftada si loo helo tamar lagu sii daayo. Faa'iidooyinka matoorka naaftada ayaa ah awood sare iyo waxqabad dhaqaale oo wanaagsan. Habka shaqo ee matoorka naaftada ayaa la mid ah kan o...
Sannadkan waxa ay ku beegan tahay 20-guuradii ka soo wareegtay markii Shiinuhu ku biiray ururka ganacsiga adduunka. Tan iyo markii Shiinuhu ku biiray WTO, warshadaha elektiroonigga ah ee Shiinaha ayaa si degdeg ah ugu milmay silsiladda warshadaha caalamiga ah, miisaankeeda ganacsiguna si degdeg ah ayuu u kordhay. Waxay noqotay "kala badh Shiinaha ...
Ma jiraa farqi u dhexeeya heerarka GB, ISO, IEC iyo IEEE ee matoorada?
GB: GB waa soo gaabinta Shiinaha Pinyin ee "Heerarka Qaranka", taas oo macnaheedu yahay heerka qaran ee Jamhuuriyadda Dadka Shiinaha. ISO: Soo gaabinta Ingiriisiga ee Ururka Caalamiga ah ee Habaynta. Magaceeda oo buuxa waa Ururka Caalamiga ah ee Standardiza...
Gaadiidka xamuulka qaada ee adduunka oo dhan, warshadaha maraakiibta ayaa wajahaya xaalad cakiran ee ugu weyn muddo 65 sano ah
Marka loo eego saameynta cudurka faafa ee cudurka sambabka ee cusub, faa'iido darrada kaabayaasha dib-u-dejinta ayaa la muujiyay, iyo warshadaha maraakiibta caalamiga ah ayaa wajahaya xaaladdii ugu weyneyd ee 65 sano ah. Hadda waxaa dunida ku sugan in ka badan 350 xamuul oo xamuul ah oo ku xayiran dekedaha, taas oo sababtay in...
Qaybtii hore ee sanadka, mugga ganacsiga ee ka dhexeeya badeecada matooradayada iyo wadamada RCEP ayaa kordhay 49.2% sanadba sanadka ka dambeeya.
Marka loo eego tirakoobyada Maamulka Guud ee Kastamka, qeybtii hore ee 2021, wax soo saarka mishiinnada korontada ee dalkayga iyo 14-ka dawladood ee xubnaha ka ah Iskaashiga Dhaqaalaha Guud ee Gobolka (RCEP) waxay gaadheen mugga ganacsiga US $ 4.13 bilyan, sannad-dhaaf ah- kororka sanadka ee...
Olombikada Tokyo 2020
Ciyaaraha Olombikada Tokyo 2020, oo sidoo kale loo yaqaan Ciyaaraha Olombikada Xagaaga ee 32aad (Ciyaaraha XXXII Olympiad), waa dhacdo isboorti oo caalami ah oo uu soo agaasimo Guddiga Olombikada Japan. Wuxuu furmayaa Luulyo 23, 2021 iyo Ogosto 8. Maalinta xidhitaanka. Tirada guud ee wadamada ama gobolada ka qayb galaya th...
Sanadguuradii 100-aad ee Aasaaska Xisbiga Shuuciga ah ee Shiinaha
1-da Luulyo, waxaa magaalada Beijing si heer sare ah loogu qabtay xuska sanadguuradii 100-aad ee kasoo wareegatay markii la aas aasay xisbiga shuuciga ah ee Shiinaha, waxaana khudbad muhiim ah ka jeediyay xoghayaha guud ee Xi Jinping. Maalmihii ina soo dhaafey ayaa dadweynihii xisbiga, kaadiriin iyo dadweynuhuba ku hawlanaayeen dacaayadaha iyo culuumta...
36. Sidee loo qaybiyaa heerka iswada ee dab dhaliyaha naaftada? Jawaab: Buug-gacmeedka, is-bilaabida, is-bilaabida iyo kabadbada beddelka dhexda dhexe ee tooska ah, fogaanta fog saddex fog (kontorool fog, cabbirka fog, la socodka fog.)
56 su'aalood oo farsamo iyo jawaabaha dab-dhaliye naaftada -maya. 35
31. Waa kuwee lixda hab ee lagu daray qalabka aasaasiga ah ee matooriyaha naaftada? Jawaab: (1) Habka saliidda saliidda; (2) Nidaamka shidaalka; (3) Nidaamka xakamaynta iyo ilaalinta; (4) Nidaamka qaboojinta iyo kuleylka kuleylka; (5) Nidaamka qiiqa; (6) Nidaamka bilowga; 32. Waa maxay sababta aan ugu dadaalno inaan ku talinno cu...
56 su'aalood oo farsamo iyo jawaabaha dab-dhaliye naaftada -maya. 30
26. Waa maxay qodobbada ay tahay in fiiro gaar ah loo yeesho marka la isticmaalayo qalab dhaliyaha naaftada? Jawaab: 1) Biyaha ku jira haanta biyuhu waa inay ahaadaan kuwo ku filan oo ay ku shaqeeyaan inta u dhaxaysa heerkulka la oggol yahay. 2) Saliidda saliidayntu waa inay ku jirtaa meesha, laakiin maaha mid xad-dhaaf ah, oo ku sii shaqeysa cadaadiska la oggol yahay.
56 su'aalo farsamo iyo jawaabaha dab-dhaliye naaftada -maya. 25
by admin 21-05-26
21. Inta jeer ee qalabka koronto-dhaliye waa mid deggan, laakiin korontadu waa mid aan degganeyn. Dhibaatadu waxay ku jirtaa mishiinka ama matooriyaha? Jawaab: Waxay ku jirtaa koronto-dhaliye. 22. Maxaa ku dhacay luminta magnetism-ka koronto-dhaliyaha iyo sida wax looga qabto? Jawaab: Koronto-dhaliye muddo dheer lama isticmaalo, c...